एक नेपाली विद्धानको मार्क्सबारेको विश्लेषण- ‘आजको २ सय वर्षमा मार्क्सजस्तो कुनै विद्धान नै जन्मेको छैन’-Nepali online news portal
एक नेपाली विद्धानको मार्क्सबारेको विश्लेषण- ‘आजको २ सय वर्षमा मार्क्सजस्तो कुनै विद्धान नै जन्मेको छैन’
उनका बारेमा म पहिले बढी ‘क्रिटिकल’ थिएँ । तर, उनले आफ्ना छोरी ज्वाईंसँग व्यक्त गरेको विचार पढेपछि म पनि प्रभावित बनें ।
एक नेपाली विद्धान प्रा. डा. आनन्द आदित्यले कार्ल मार्क्सकाे बारेमा निकै गहकिलाे र विचाराेत्तेजक विचार प्रस्तुत गरेका छन् । डा. अादित्यले कार्ल मार्क्सकाे बारेमा अनलाइनखबरका लागि पस्किएकाे विचारकाे सम्पादित तथा संक्षिप्त अंश ।
कार्ल मार्क्स जन्मेको ठ्याक्कै दुई सय वर्ष अर्थात् दोस्रो शताब्दि पूरा भएको छ । उनी कम्युनिस्ट विचारधाराका प्रतिपादक मात्रै होइनन्, विश्वमा पहिलो पटक मानवतावादी दर्शन बोकेका एक चिन्तक पनि हुन् ।
यही चिन्तनका कारण उनले आफ्नो मुलुक जर्मनी छाड्नु पर्‍यो । फ्रान्सलगायत मुलुकबाट पनि धपाइए । अन्तिममा बेलायतीहरुले उनलाई ठाउँ दिए । र, त्यहीं जीवनको आधाभन्दा बढी समय बिताए ।
बडो दुःख र पीडाको जिन्दगी बिताए, कार्ल मार्क्सले । रोग, भोक र शोक तीनै कुराले उनलाई क्लान्त गरेका थिए । तर, निश्रान्त पथिकका रुपमा उनी हिँडिरहे ।
उनका बारेमा म पहिले बढी ‘क्रिटिकल’ थिएँ । तर, उनले आफ्ना छोरी ज्वाईंसँग व्यक्त गरेको विचार पढेपछि म पनि प्रभावित बनें । र, मैले आफ्नो धारणामा पुनर्विचार गरें ।
उनले भनेका छन्- ‘हेर मैले पुनर्जीवन पाएँ या त्यो अवसर आयो भने पनि म यही बाटो रोज्छु । मेरो अर्काे बाटो हुँदैन र त्यसमा म कटिबद्ध छु । र, मैले जे विचार बोकेको छु, त्यसबाट डग्दिनँ । तर, मैले जोसँग बिहे गरें, अर्को जन्ममा उनीसँग बिहे गर्दिनँ । किनभने मैले यो जुनीमा उनलाई दुःख मात्रै दिए ।’
कार्ल मार्क्सले आफ्नो वादलाई शुरुमा ‘कम्युनिजम’ नभनीकन ‘ह्युमिनिजम’ भनेका रहेछन् । प्रखर चिन्तक हुन् तर मानवतावादी रहेछन् ।
खुशी लागेको छ, मैले कार्ल मार्क्सलाई अर्कै रुपमा देखें । तीन वर्षअघि मलाई नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)का निर्देशक डा. मृगेन्द्र कार्कीले मार्क्सबारे कार्यपत्र लेखिदिन भन्नुभयो । मैले शुरुमा इन्कार गरें किनभने त्यो ठूलो विषय थियो ।
तर, दोस्रो पटक आएको अनुरोधलाई नकार्न सकिनँ । र, त्यही क्रममा कार्ल मार्क्सको जीवन यात्रा बोध भयो । उनी त अर्कै मानिस रहेछन् ।वास्तवमा उनले आफ्नो वादलाई शुरुमा ‘कम्युनिजम’ नभनीकन ‘ह्युमिनिजम’ भनेका रहेछन् । प्रखर चिन्तक हुन् तर मानवतावादी रहेछन् ।
जीवनको पूर्वार्द्धमा मानिसमा युवा जोश हुन्छ र विश्व नै परिवर्तन गर्छु भन्ने किसिमको प्रखर ज्वालाका रुपमा निस्किन्छ । तर, अन्त्यमा त त्यो मानवतावादी भएर जाँदो रहेछ ।
बीबीसीले केही समयअघि एउटा रिसर्च पनि गरेको रहेछ । त्यसमा विश्वका २० उत्कृष्ट चिन्तकमध्ये मार्क्सले नै सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरे । यो पनि आश्चर्यजनक कुरा होइन ।
बेलायतमै बस्दा उनले रुसी भाषा सिक्न थालेछन् । त्यसको दुई महिनाभित्रै उनको दराजमा रुसी भाषाका दर्जनौं किताब जम्मा भइसकेछन् । उनी त्यति तीव्र गतिका ‘लर्नर’ रहेछन् । यो चाहीं आश्चर्यको विषय हो ।
त्यस्तो व्यक्तिलाई पोलिग्लट भनिन्छ । उनी आठ भाषा बोल्थे । जबकि, रुसी भाषाको लिपी नै अर्कै छ । उनी त्यसमा दुई महिनामै पारंगत बने । उनी चिन्तक, लेखक र अध्ययनकर्ता मात्रै होइनन् । उनका २/३ सन्तानलाई रोगले नै लग्यो । इलाज गर्न सकेनन् ।